Madaxda DF oo ka qeyb galaya heshiis maanta ka dhacaya Villa Somalia - Caasimada Online
Home Warar Madaxda DF oo ka qeyb galaya heshiis maanta ka dhacaya Villa Somalia
Madaxda DF oo ka qeyb galaya heshiis maanta ka dhacaya Villa Somalia
Muqdisho (Caasimadda Online) – Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu wadaa in uu ka furmo shir u dhaxeeya Maamullada Ahlu Sunna iyo Galmudug,kuwaas oo dhawaan heshiis horudhac ah ku yeeshay Dalka Jabuuti.
Sarkaal ka tirsan Maamulka Ahlu Sunna ayaa u xaqiijiyay Caasimadda Online in shirkan galabta lagu wado in uu furmo ay ka qeybgelayaa madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa KNN u sheegay in Xafladda lagu qabanayo Madaxtooyada Soomaaliya ay tahay mid lagu dhameystirayo Heshiiskii hor-dhaca ahaa ee Galmudug iyo Ahlusunna ay ku soo kala Saxiixdeen Wadanka Jabuuti.
Shirka galabta ka furmaya Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgelaya ka qeybgalayashii shirkii April ee bishii April Muqdisho ku fashilmay.
Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa dhawaan heshiis ku saxiixday Jabuuti,waxaana ay inta ka dhiman wadahadalkooda sheegeen in ay ku dhameysanayaan shir ka dhacaya Magaalada Dhuusamareeb.